Eson’ ‘Lita (Insolite) | GAZETY_ADALADALA
Eson’ ‘Lita (Insolite)
Posted on 04/12/2009 by gazetyavylavitra
Dia nitana ny heviny tokoa moa izany ingahy Andry RAJOELINA ka tsy nandeha any Maputo. Izy rahateo efa nolazain’ingahy ZAFY ALBERT fa tsinontsinona (rien) tamin’ny fotoana niaingan-dry zareo teny Ivato. Angamba vao mainka nanamafy izay fitazonany ny teniny izay koa ny filazana avy amin’ny antoko-miaramila mpiambina azy fa hoe ‘nisy nitifitra tamin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny fiara nitondra an’ingahy RAJOELINA, teo an’elanelan’Ambodimita sy Ambohimanarina’. Tsy haiko ny amin’iny fa dia samy manaraka eo isika rehetra.
Fa ny tena anton’ny lohateny sy nahatonga an-draLita haneso (nivadika ho Insolite), dia ity: ry zalahy any Maputo mivory mikononkonona izay hatokony, aty Madagasikara (Toamasina) kosa ny vadin’ingahy MANGALAZA Eugene miara-misakafo ambony latabatra amin’i Mialy RAJOELINA, torian’ny fitsidihana nataony tany an-toerana ao anatin’ilay ‘Ady amin’ny herisetra atao amin’ny vehivavy’. MISIMISIA NY TOY IZANY.
Mahafinaritra anie zany e! Mampahatsiahy ahy anay roalahy tsy mitovy fijery eto amin’ny aterineto, nefa afaka miara-dalana sy mifandom-bera.
Efa hoe ny hevitra ho’aho afaka tsy mitovy (ary izany rahateo no mahatonga antsika milanja loha iray avy eny ambonin’ny sorony), fa tsy izany no atao hifandrafiana sy hifamonoana.
Tsetsatsetsa tsy aritra: misy aminareo no manoratra mail amiko manontany ny antony tsy dia nanoratako firy mihitsy hatreto, sy ny hoe aiza ny sary, sns… tsy voatanisa. Valiny: Anaty tsy fahasalamana ny mpanoratra, efa ho fotoana lavalava ihany, nefa kosa hiezaka hatrany hanome anareo ny kely fantany sy hitany eny rehetra eny. Ny sary moa dia ialako tsiny fa tsy tratry ny aiko aloha hatreto ny manenjikenjika etsy sy eroa.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Mangalaza, maputo, Mialy, Rajoelina |
« SOLOY IREO SARY An’ny TAXIBE indray izao ny manaraka… »